Nampahatsiahy ny Praiminisitra fa nanomboka ny taona 2016 ary hatramin’ity taona 2019 ity dia efa nisitraka io famatsiana io, izay mitenina 11.5 tapitrisa dolara Amerikana isika eto Madagasikara.
Nandritra ny fivoriana omaly dia nanao tombana tamin’ny vokatra azo ny komity mpitantana, ary nandray anatra tao anatin’ny fanatanterahana ireo tetikasa. Anisan’izany ohatra “ny ezaka maro vita, mahakasika ny faritra atsimon’ny Nosy, ankoatra ny fanamafisana ireo rantsana miady amin’ny kolikoly sy ny famotsiam-bola, toy ny Bianco sy ny SAMIFIN”, hoy ihany izy.
Heverin’ny komity mpitantana ankehitriny fa tokony hirosoana ny fijerena hatrany amin’ny fakany an’ireo zavatra manohintohina ny filaminana sy ny fandriampahalemana eto Madagasikara, ary indrindra, hijery manokana ny mikasika ireo tanora, mba hahafantarana ny fomba hitantanana azy ireo tsy hivari-lavo.
Nanamarika ny Praminisitra fa tena zava-dehibe nodinihina tao anatin’ny atrikasa io resaka tanora io, satria toe-draharaha izay mety hiafara amin’ny fanjakan’ny tsy fandriampahalemana.